DEG DEG:- Ciidanka nabad-sugidda oo haatan su’aalo weydiinaya haweeney hubeysnayd oo ay qabteen – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Ciidanka nabad-sugidda oo haatan su’aalo weydiinaya haweeney hubeysnayd oo ay qabteen
Haweeney la sheegay inay ku hubeysnayd qoriga AK-47 ayaa goordhaw lagu qabtay agagaarka isgoyska Black-Sea ee magaalada Muqdisho, iyadoona haatan su’aalo lagu weydiinayo xarunta hay’adda nabad-sugidda qaranka ee NISA.
Ciidamada nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo howlgalo baaritaano ah ka sameeyay degmooyinka magaalada Muqdisho ayaa u suurto gashay inay gacanta ku dhigaan haweeneydaasi hubeysan.
Saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa inoo xaqiijiyay in haweeneydaasi hubeysan gacanta lagu dhigay islamarkaana su’aalo lagu weydiinayo xarunta nabad-sugidda qaranka ee magaalada Muqdisho.
Ilaa iyo haatan lama oga waxa ay haweeneydaasi ka damacsaneyd qoriga ay wadatay, waxaana ay ciidanka nabad-sugidda isku dayayaan inay ogaadaan xogta ka dambeysa arrinkaas.
Saacadaha soo socdo ayaa la filayaa in hay’addaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya ay ka warbixiyaan natiijadda kasoo baxday wareysiga haweeneydaasi haatan su’aalaha la weydiinayo.